Alshahid oo furtay Siminaar ka hadlaya Qorsheynta (Sawirro) | Shabakada Alshahid
Alshahid oo furtay Siminaar ka hadlaya Qorsheynta (Sawirro)
Saved under Faaqidaad, Horumar, Muuji, Sawirada, Warar, Warbixin
Maamulaha Xarunta Alshahid qaybta Somalia mudane Cabdiraxmaan Mohamed oo hadal furitaan ah ka jeedinayay Siminaarka maanta dhacay
Mogadishu (Alshahid)- Xarunta Cilmi-baarista iyo Diraasaadka Saxaafadda ee Alshahid ayaa maanta furtay Kulan Aqoon-is-waydaarsi looga hadlayo sida loo diyaariyo Qorsheynta Istaraatiijiyadeed (Stratigic Planning), iyadoo Furitaanka Kulankana ay kasoo qayb galeen mas’uuliyiinta Xarunta iyo Marti-sharaf kale.
Ku xigeenka Maamulaha Alshahid ee Somalia Hassan Muudey Cabdullahi oo isna ka hadlay Siminaarka
Ugu horeyntii Madaxa Xafiiska Muqdisho ee Xarunta Alshahid Mudane Cabdiraxmaan Maxamed ayaa hadal furitaan ah ka jeediyay Hoolka Shirarka ee Alshahid oo Kulanku uu ka dhacay. Wuxuuna Maamuluhu ku dheeraaday ka hadalka Alshahid iyo howsheeda.
Bile Ismacil Diriye oo ah Macalinkii Darsiga ka bixinayay Siminaarka maanta
Maamuluhu wuxuu u mahadceliyay kasoo qaybgalayaasha Siminaarka. Intaa ka dibna wuxuu xusay in Alshahid ay u taagantahay isu-keenista dhinacyada kala duwan ee Bulshada si loo qabto Doodo Cilmiyeeysan oo lagu raadinayo Xog iyo Warbixin muhiim u ah horumarka Bulshada Soomaaliyeed.
Mudane Cabdiraxmaan ayaa intaa raaciyay in Siminaarka maanta furmaya ee looga hadlayo Qorsheynta Istaraatiijiyadeed uu qayb ka yahay Siminaaro iyo Kulamo aqooneed oo ay Xaruntu in mudo ahba u qabanaysay Aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo dadka ku howlan Aqoonta dalka.
Wuxuu kula dardaarmay kasoo qaybgalayaasha Siminaarka inay ku dadaalaan sidii ay wax badan uga qaadan lahaayeen halkaas, dabadeedna ay hirgaliyaan waxyaabaha Siminaarka ay ka barteen oo runtii muhiim u noqonaya horumarka bulshada Soomaaliyeed sida uu Maamuluhu tilmaamay.
Cumar Mohamed Osman oo Martida u hadlaya
Sidoo kale Maamulaha Alshahid Xafiiskeeda Muqdisho ayaa ka hadlay howlaha ay Xaruntu qabato iyo inay Xafiisyo kala duwan ku leedahay dalalka UK, Kenya iyo Somalia. Wuxuuna u sheegay ka qaybgalayaasha Siminaarka inay jiraan Buugaag Cilmiyeed oo ay Xaruntu soo saarto isla markaana aad muhiim ugu ah dhamaanba dadka Waxbarashada ku howlan.
Intaa ka dib waxaa hadalo goobta kasoo jeediyay qaar Martida ka mid ah. Waxaana ku jiray Cumar Mohamed Osman oo Marti-sharafta afkooda ku hadlayay.
Mr. Cumar oo ah Khabiir ka shaqeeya arrimaha Horumarinta Bani’aadamka (Human Development) ayaa Sharaxaad dheer ka bixiyay muhiimadda ay Qorsheyntu u leedahay horumarka dalalka, isagoo tusaale usoo qaatay Wadamo badan oo ku horumaray Dhaqaalaha iyo Siyaasadda oo uu yiri waxay xoga saareen Qorsheynta Istaraatiijiyadda.
Siminaarka wuxuu soconayaa Laba Maalin. Waxaana maanta la guda galay qaybtiisa Koobaad oo uu Casharo kasoo jeediyay Ustaad Bile Ismacil Diiriye oo ah Macalin wax ka dhiga Jaamacadda SIMAD kana shaqeeya Shirkadda Isgaarsiinta ee TELCOM Somalia.
Ustad Salax Dhiblaawe oo ka tirsan Bahda Alshahid ayaa isna ka hadlaya Siminaarka
Ustaad Bile wuxuu Darsigiisa maanta kaga hadlay Qorsheynta Istaraatiijiyadda iyo muhiimadeeda. Waqtigii loogu tala galay Darsigaasna wuxuu kusoo dhamaaday si aad u wanaagsan oo ka qaybgalayaashuna ay ka faa’ideysteen.
Markii Darsiga uu soo dhamaaday waxaa ku xigtay Su’aalo iyo dood kooban oo ka qaybgalayaashu ay is-dhaafsanayeen iyagoo ka hadlayay Istaraatiijiyadda, Qorsheynta iyo muhiimadda ay u leedahay Soomaalida.
Si kastaba ha ahaatee Siminaarka maanta ayaa si wanaagsan usoo dhamaaday, waxaana loo balamay maalinta Berrito ah oo qaybtii hartay la gali doono.